Forum serasera malagasy Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahafito - Dinika forum.serasera.org
Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahafito
Fitohizan'ny hafatra : Ny fiheveran-dison'i Darwin, fizaràna fahafito
Nehemiah - 14/05/2013 08:11
Taorian'ny diany tany Galapagos, azon'i Charles Darwin an-tsaina tsara fa vontoatin'ny fotopisainany ny fantina natoraly, fa mbola tsy hitany izay mampahomby ny fantina natoraly tahak'izao.
Kanjo, sendra novakiany ny bokin'i Thomas Robert Malthus, mitondra ny lohateny hoe "An Essay on the Principle of Population". Ny antony nanoratan'i Malthus an'io boky io dia ny hanoherana ny filôzôfian'ny Lumières milaza fa tsara fanahy ny olombelona, nivoatra avy t@ olon-dia izy ary tsy maintsy mizotra @ fahatanterahana satria lalàn'ny voary izay. Ny zavatra nolazainy t@'ity boky ity dia mitombo malaky lavitra nohon'ny loharanon-karena ny vahoaka, ka farany dia tsy ho ampy iveloman'ny vahoaka intsony ny harena sy ny hanina misy ao ka manjary hiady ho an'ny loharanon-karena ny vahoaka.
Ka jereo anie ny zavatra lazain'i Darwin @ biôgrafian'ny tenany :
T@ ôktôbra 1838... Mba namakivaky ny bokin'i Malthus momba ny vahoaka aho, ary satria efa voaomana tsara hibanjina ny tolom-piainana hita ombieny ombieny nohon'ny fandinihako ny fombafomban'ny biby sy ny zavamaniry mandritry ny fotoana ela be, tonga dia tsikaritro fa tsy maintsy voatazona ny fiovàna miteraka tombontsoa ary rava ny fiovàna miteraka voka-dratsy @'izao toe-javatra izao. T@'iny aho no mba nahita teôria azo iasàna...
Ka eo indrindra isika : RAHA NY FOTOPISAINAN'I DARWIN NO ARAHINA DIA NY MAFY INDRINDRA NO MANDRESY @ TOLON'NY FANTINA NATORALY, KA MITERAKA FANDRINGANANA SY FANDATSAHAN-DRA ARY FAHAFATESANA TSY TAKATRY NY SAINA IZAY, kA MIDIKA IZAY FA TSY MISY ANDRIAMANITRA !!! Mazava ho azy izany : @ fomba ahoana no ahafahan'ny Andriamanitra fitiavana hamela an'izao fahoriana mihoapampana izao hitranga @ voariny ?
Izay, tompoko, no vontoatin'ny fotopisainan'i Darwin.
Taona vitsivitsy taorian'ny nivoahan'ny "The Origin of Species", nandefa ny bokiny mitondra ny lohateniny hoe "Das Kapital" t@ Darwin i Karl Marx, izay tena nankafy ny asan'i Darwin ka nangataka t@ mba hametraka autographe @ bokiny. Tsy havanana @ teny alemà i Darwin ka tsy novakiany ilay izy, nefa angamba iaraha-mahafantatra ny hevitra naroson'i Marx t@'iny boky iny : @ fiaraha-monin'ny olombelona, tsy vitan'ny olona samy olona na ny foko samy foko no miady ho an'ny fitohizan'aina, fa ny sokajy samy sokajy (bourgeoisie sy prolétariat).
Dia gaga ianao raha manohana ny fotopisainan'i Darwin tahak'izao ny mpomba an'i Marx rehetra : mifameno ny fotopisainana manohitra an'Andriamanitra namboarin'izy 2 lahy ! Nilaza i Lenine fa ny olona milaza azy ho "mahery setra" dia nanadino ny vontoatin'ny fotopisainan'i Marx ! Mba eritrereto anie e !
Zavatra 1 loha sisa no mbola mila dinihina : inona no mari-pitsaràna ampiasaina mba hamantarana hoe iza no misahaza ?
_ Raha ny foko (ethnicité) no atao mari-pitsaràna dia hirona @ nazisme na @ tribalisme tahaky ny tany Rwanda isika (aza mety ambakaina ianareo, ny fotopisainan'i Darwin no antony ifotony nahatonga ny Hutu hanao génocide ny Tutsi e !).
_ Raha ny firehan-kevitra (idéologie) indray no atao mari-pitsaràna, hirona @ komonisma isika. Misy endrika 2 ilay izy : na ny bolchevisme any Rosia (miaraka @ Lenine sy Staline), na ny Maoïsme any Cbine (miaraka @ Mao) sy Cambodge (miaraka @ Pol Pot).
_ Raha ny toe-karena kosa no atao mari-pitsaràna... jereo fotsiny ny vaovao an-tsary e : mirona @'izao fiaraha-monina tandrefana mandala ny maha-olombelona sy mandà an'Andriamanitra misy antsika izao isika.
Andeha indray ary isika hanisa ny maty.... Ny tarehimarika omeko eto dia ny vinavina ôfisialy ambany indrindra, sao dia misy gaga satria tsy mifanaraka ny tarehimarika omeko eto sy ny tarehimarika nomeko t@ farany.
16 700 000 farafahakeliny ny isan'ny olona novonoin'ny Nazis ivelan'ny ady (tsy Jiosy ihany, fa ao koa ny mainty hoditra, ny mpanelaka,...).
900 000 farafahakeliny ny isan'ny olona maty t@ génocide tany Rwanda tao anatin'ny 100 andro. Io no génocide malaky indrindra t@ tantaran'ny olombelona.
20 000 000 farafahakeliny no matin'ny bolchevisme.
40 000 000 farafahakeliny no matin'ny Maoïsme tany Chine.
Ny any Cambodge indray dia 1 700 000 no maty, izany hoe ny antsasaky ny vahoaka tany eo ho eo.
Ka mety milaza ny sasany fa tsy nanao vonomoka an'iza na iza ny fiaraha-monina tandrefana ankehitriny, fa saingy arakaraky ny famaritany ny atao hoe "fiainana" izay : t@ taona 1987, mbola 53 000 000 ny fanalan-jaza. Araky ny sity abortionno.org, mbola 42 000 000 ny fanalan-jaza isan-taona eran'izao tontolo izao. 83%-n'ireny no atao @ firenena mandroso. 1%-n'ireny no atao nohon'ny fanolanana. 6%-n'ireny no atao nohon'ny olana ara-pahasalamàna lehibe mety hianjady @ reny sy/na ny zaza. Ny 93% sisa dia nohon'ny antony ara-piaraha-monina (tsy nirina na ratsy fitotona na sembana... ilay zaza).
Zavatra 2 loha no tiako lazaina aminareo :
_ tao anatin'ny taon-jato 1 monja, izany hoe ny taon-jato faha-XX, ilay taon-jato taorian'ny nahaveloman'i Darwin, no nitrangan'ireo heloka bevava be dia be ireo
_ nifandraika tanteraka @ darwinisme ara-piaraha-monina izy ireo.
Milaza matetika mantsy ny fahavalon'ny finoana kristiana fa nanao habibiana ny kristiana. Ireto avy ny tranga antitranteriny :
Ka tokony mi-remettre les pendules à l'heure kely isika.
Zavatra voalohany, mazava loatra fa resaka pôlitika no tena ifotoran'ireny tranga ireny fa tsy dia resaka fivavahana loatra.
Nanafika ny firenena kristiana (izany hoe ny Espagne) t@ 711 ny Arabo. Inch'Allah fa nisy an'i Charles Martel tany Poitiers t@ 732, fa raha tsy izay dia efa Allah akbar izao tontolo izao. T@ 1099 ny Croisade voalohany. Ka tsy hoe mety ny namonoana olona 30 000 tany Jerosalema t@ 1099 tsy akory, fa kosa, araky ny fandinihan'ny mpahay tantara, valifaty ara-drarin'ny fanafihana nataon'ny Silamo mandritry ny taona an-jatony ny Croisades.
Tsy hoe misy habibiana nitranga t@ ady 1 dia midika fa tsy mety ilay ady e. Nisy ny habibiana nitranga t@ Guerre de Sécession, kanefa tsy azo lavina fa antony mendrika tokoa ny fanafahana ny mainty hoditra tany Etazonia atsimo @ fanandevozana. Ny olana izao t@ Croisades dia tsy nahay Baiboly ny miaramila nandeha tany. Nanana ny fomba fisainan'ny fahamarinana avy @ asa izy ireo, ary nieritreritra fa hahazo ny famonjena raha mandeha mamono infidèle any Palestina izy ireo.
Kanefa tsy mba ny finoana kristiana velabelarin'ny Baiboly no nahatonga ny habibiana. Raha tena nanaraka ny Baiboly izay milaza fa ny fahasoavana irery izay avy @ finoana irery no mahavonjy, araky ny fitanisan'i Paoly ny Gen. 15:6 hoe "Ary nino an’ i Jehovah izy; ka dia nisainy ho fahamarinany izany" (Rom. 4:3, Gal. 3:6, izahao Ef. 2:8-9) dia tsy nanao an'izay izy ireo.
Tsy namono "afa-tsy" olona 3 250 ny Inquisition tao anatin'ny 350 taona.
Ny fitsaran'i Galileo @'izany dia tsy nahitàna fahafatesana na fampijaliana na kely aza.
Dia mba ampitahao @ tarehimarika etsy ambony anie izay e.
Fa ny tena zava-dehibe dia ity : tsy mifanaraka @ fampianaran'i Jesoa Kristy ireto heloka bevava nataon'ny Fiangonana (Katôlika Rômana) ireto. Ny finoana kristiana dia "Tiava ny fahavalonao', "Aza mamono olona", "Tsy ny fitaovam-piadian'izao tontolo izao no entintsika".
Ny tanjon'ny finoana kristiana dia ny hamonjy fiainana, fa ny tanjon'ny darwinisme dia ny hanapitra fiainana !
Nehemiah - 14/05/2013 08:15
Ity ny rohy mankany @ fizaràna taloha ho an'izay liana :
Nehemiah - 17/05/2013 15:55
Ity @'izay ny rohy mankany @ fizaràna farany :
voromailala - 13/06/2013 11:08
Tsy miaro na an'iza na an'iza aho fa manazava anareo ny fomba fijeriko.
i Darwin dia milaza fa mievoluer daholo ny zavatra rehetra eto antany.
Dieu est parfait. raha manaiky an'io ianareo dia zavatra namboarin'Andriamanitra koa izany dia parfait.
Ao anaty baiboly milaza tamin'ny andro faha 6 dia vita ny fanamboarana " Creation", dia nakaina izy ny androfahafito.
Izay hoe izany creation izany midika fa vita tanteraka, tokony tsy hisy evolution intsony, satria
Dieu est parfait, creationko parfaite.
noho izany tokony hoe 1 janvier foana izany ny andro satria parfait tsisy evolution intsony?
Nefa hiarahamalala fa misy foana ny evolution ny zavatra rehetra hatramin'ny izao. Io no tsy tian'ny Fiangonana nahatonga azy nanenjika an'i Darwin.
Nehemiah - 13/06/2013 15:10
Inona kay no famaritan'i Voromailala ny evôlisiona ? Raha ireny resaka lolo mivadika ho mainty rehefa lasa mainty ny hazo bouleau nohon'ny sarbô @ rivotra dia lolo miteraka lolo ihany io. Niova tampoka ny tontolo niainany dia mba sendra nisy sampona nahatonga ny lolo sasany ho mainty, ka ireny no nandrombona satria lasa izy ireo indray no tsy hitan'ny vorona mihaza azy ireo.
Fa ny sampona dia fahasimbàna @ antontan-kevitra ao anatin'ny fototarazo (gènes), tahaky ny DVD mikiky. Raha kikisanao kely isan'andro ny DVD-n'i Malok'Ila 21 dia tsy mba hivoaka avy ao ny tohi3n'ny "Seigneur des Anneaux", fa ho simba tanteraka tsy hay vakiana intsony. Tahak'izay koa ny sampona. Lazain'ny néo-darwinisme fa afaka manova ny mikrôba ho olombelona izay, fa tsy marina izay.
voromailala - 17/06/2013 12:52
Aza havadika ilay resaka fa valio hoe Parfait ve Andriamanitra, noho izany tokony parfait koa ny zavatra nataony, ny creation nataony. Izany creation izany miditra hoe tapitra tsisy evolution intsony.
Maninona anefa mbola misy evolution ny eto antany?
Nehemiah - 17/06/2013 15:03
Inona ho'aho ny famaritan'i Voromailala ny evôlisiona ? Raha tsy izay dia tsy hifankahazo mihitsy isika.